Shir Looga Arinsanayo Xaaladda Puntland Oo Garowe Ka Furmaaya (Dhegayso) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Shir Looga Arinsanayo Xaaladda Puntland Oo Garowe Ka Furmaaya (Dhegayso)
Shir Looga Arinsanayo Xaaladda Puntland Oo Garowe Ka Furmaaya (Dhegayso)
December 19, 2012 - By: Hanad Askar
Waxaa Caasimadda Puntland ee Garowe tegay ergooyin badan oo ka socda Gobolada Bari iyo Karkaar, sidoo kale waxaa lagu wadaa in maalinta berri ah ay soo gaaraan ergooyin kale oo ka imaanaya Gobolada Sanaag, Haylaan, Mudug, Sool iyo Cayn. Ujeedka shirkan ayaa qaar kamid ah ergooyinku Horseed Media u sheegeen in ay tahay in ay ka arrinasadaan xaaladda Puntland maadaama la soo gaarey xili baarlamaankiina waqtigii loo dhaariyey la soo dhaafey, Xukuumaddana maalmo u harsan yihiin, sidii la yeeli lahaa isla markaana doorasho loo qaban lahaa.
Fiidnimadii xalay waxaa Hotelka Al-Xaramaeyn ee magaalada Garoowe ciidanka amaanku kala baxeen odoyaal gaaraya 4 kuwaas oo ahaa Nabadoono ka tegay magaalada Bosaso, Nabasdoonada ayaa la geeyey Saldhiga Booliska Garowe, waxaana la weydiiyey su’aalo ku saabsan waxa ay Garowe u yimaadeen, waxaana uu ahaa go’aan dawladeed muddo kadibna waa la soo daayey.
Hadaba waxaa noo suurta gashey in aan waraysi la yeelano nabadoonadii xalay la geeyay Saldhiga magaalada kuwaas oo kala ahaa:
Nabadoon Xaaji Sicid Axmed Yusuf
Maxamed Shoobe Afcase
Caaqil Sahal Cabdislaaan Yuusuf Faahiye
Caqiil Maxamuud Maxamed Shirwac
Dhegayso Waraysiga nabadoonada[powerpress]
Nabadoon Xaaji Siciid Axmed Yusuf ayaa sheegay in ay Garowe u tageen shirka ka furmaaya kaas oo ay isugu imaanayaan beelaha dega Puntland ee isir wadaagta ah, shirka ayuu sheegay in uu ku saabsan yahay xiligii dawaldda oo gebegebo ah, waa muhim in la wada hadlo oo doorasho dhacdo, muhim maaha cidda la doornayo qofkuu doono ayuu noqon karaa xitaa madaxweynaha hadda ayuu noqon karaa. Nabadoonka ayaa sheegay in shirka hadda la sugaayo beelaha Mudug dega iyo Sanaag.
Dhanka kale Nabadoon Xaaji Siciid Axmed Yusuf ayaa sheegay in xariga xalay uu dhacay, si nabad ah ayey ahayd, Saldhiga ayaa nala geeyey waraysi ayaana ciidanka amaanku nala yeeshey waxaana u sheegney waxaan u tagney halkaas, waxaana u caddeyney in shirkayaga in dawladdu soo faro gashato aanan dooneyn. Nabadoon Siciid waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in doorasho dhacdo.
Nabadoon Shoonbe Afcase ayaa isaguna dhankiisa ka hadley in ay yihiin cuqaal u socota danta Puntland, 08 Janaayo 2013 haddii la gaaro waa xiligii isbedelka taas oo nidaamka hadda jira aanu soo bandhigin, marka in la tashado oo wada hadal arrintaas laga yeesho weeyaan, dawladda wax hadal ah kama hayno, waana dawladdii aan dhisney, haddii ay garan weydey waqtigeedi in uu dhamaad yahay waxaa lagama maarmaan noqotey in talo guud la isugu yimaado. Nabadoon Shoonbe ayaa ku tilmaamey in Baarlamaanka waqtigiisi dhacay 4 sano loo dhaariyey, shirarka ay hadda qabsanayaana maaha wax sharci ah. Nabadoonka ayaa sheegay waa in xal la helaa, umadda reer Puntland ma garowsan muddo ayaan kororsaney.
Caaqil Sahal Cabdisalaamn Yusuf Faahiye ayaa sheegay in uu ka mid yahay caaqilada so jireenka ah ee Moorcasaha, waxaan nahay ergo, ergo waxay tahayna waa la yaqaan, maamulkii aan dhisaney xiligiisi waa dhamaad, buuqa jira waan ognahay, caaqilada nabadoonada iyo waxgaradka ayaa arinta qabta Isimaduna waa guddoonshaan, marka anagu xaaladda ayaan ka ergeyneynaa ayuu yiri Caaqilku.
Caaqil Maxamuud maxamed Shirwac ayaa isaguna baaq u jeediyey Dawladda oo ay tixgeliyaan sharciga isla markaana doontitaanka bulshada ay muhimad siiyaan wax walbana si nabad ah ku dhameeyaan, muwaadiniinta reer Puntland ayuu u jeediyey in ay si nabad ah iyo is afarag ku raadiyaan xalka Puntland.
Ergooyin kale oo la xanibay
Maantey waxaa magaalada Garoowe tegay ergo kale oo badan oo ka soo baxay Gobolada Bari iyo Karkaaar, laakiin ergada ayaa lagu xanibey Kantaroolka Waqooyi ee Garoowe halkaas oo ay ku sugnaayeen muddo 4 saac ah loona sheegay in aysan geli karin magaalada, kadib waxaa Islaan Ciise gurigiisa ugu tegay ergo uu hoggaaminayo Cabdicasiis Boqor Muuse iyo Cabdikaafi Xassan maxamed, waxaana ay Islaanka kala hadleen arrinta foosha xun ee ka dhacdey kontroolka Garoowe oo lagu horjoogo nabadoono iyo waxgarad kala geddisan. Muddo saacado ah kadib waxaa lagu guuleystey in ergadu soo galaan magaalada Garowe.
Arrimahan ayaa imaanaya iyada oo xiligii loo dhaariyey xafiiska Madaxweynaha ay ka hasran tahay maalmo qura, Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxmaan Faroole ayaa ku adkaysanaya weli in sanad kale oo dheeraad ah u harsan yahay taas oo loogu daray isla sanadkan, taas oo in badan oo kamid ah shacabka Puntland aysan garawsan kana biyo diideen. Ma cadda in xukuumaddu ka hor istaagi doonto ergadan in ay shirka ku qabsadaan caasimadda Puntland ee Garowe iyo in kale.
Codka weriyaha waraystey waxaa loo jaray arrimo amaankiisa ah darteed